Shina ambany Iron U Profile Glass / U Channel Glass Power Generation System orinasa sy mpanamboatra | Yongyu
Ny ambany vy U profil goavam-pananganana famoronana vera fitaovana (UBIPV) dia mitambatra ny tombony azo avy amin'ny tranokalan'ny tranokalan'ny U profil sy ny rafitry ny famokarana herin'ny masoandro mba hampiroborobo ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny famokarana angovo ary ny fampihenana ny famoahana. Ny UBIPV sy ny tanàna dia afaka mirindra tsara mba hahatonga ny fotovoltaic ho zon'ny fiainana olombelona. Tsy vitan'ny fananganana fitaovam-panorenana ihany, fa afaka mamita angovo sy angovo famokarana angovo ihany koa, ary afaka mikambana amin'ny rindrina mitambatra LED, rindrina electrochromic ary rafitra fanaraha-maso. Mba hahatsapan'ny maintso-miampy lanja avo lenta amin'ny trano ary manatsara ny kalitaon'ny trano rehetra, ny UBIPV no fivoaran'ny trano maitso amin'ny ho avy.
Ny fitaovam-panamboarana famoronana vera herinaratra U UIPIPV (UBIPV) dia azo atambatra na fanodinana, izay mahomby amin'ny fampihenana ireo rafi-pandrafetana napetraka amin'ny tranobe sy ny rafitry ny herin'ny masoandro, mampihena ny vidin'ny fitaovam-piasana sy ny fikojakojana ny asa, ary manatsara ny fampiharana sy ny sandan'ny fampiasana ny sandan'ny trano .
(UBIPV) fananana ara-batana
Herin'ny mekanika: 700-900N / mm2; aorian'ny fisasahana> 1800 N / mm2;
Ny hamafin'ny Mohs: 6-7
Modulus elastika: 6000-7000 N / mm2;
Hafa-maso fanitarana ny tsipika (fiakaran'ny hafanana 1 degre Celsius): 75-85 × 10-7;
Fiarovana simika: 0.18mg;
Transmittance: fametrahana tsangana vita tsara tsara, laharana fotsy fotsy fotsy 91%; fametrahana laharana indroa 80%;
Hoderna famindrana hafanana: fametrahana tsipika tokana <4.9 W / ㎡ · K, fametrahana roa andalana <2.35 W / ㎡ · K, fametrahana roa sosona aorian'ny fametrahana lamination <2 W / ㎡ · K;
Fahaiza-mitambatra feo: fametrahana tsipika tokana ahena amin'ny 27db; fametrahana tsipika indroa nihena 38db; fametrahana tsipika laminated diloilo nihena nihena mihoatra ny 40db;
Famepetan'ny afo: 0.75h;
Lisitry ny fampiharana
U mombamomba ny famoronana vera herinaratra fananganana herinaratra dia afaka ampiasaina betsaka amin'ny fanamboarana tafo, fanamboarana rindrina insulasi rindrina any ivelany, lalambe hendry, tafo mivoatra, fialofana maranitra, toeram-pivarotana hendry, trano fambolena, tafo villa, rindrina trano ary trano maivana;
1) Hery mahery vaika, ny vokatra dia manana tanjaka matevina sy tanjaka ara-materialy, mahatohitra mihoatra ny 100Kg / m2, tsy mora ovaina ary mahatohitra tsindry oram-panala sy havandra. Mitovitovy amin'ny firafitry ny fantsona fantsona, mahatohitra ny tsindry rivotra ary misoroka ny fanapoizinana sela.
2) Tsy misy rindran-tsary, tsy misy lesoka PID. Ny endrika famoronana R-glass dia manakana ny hazavana tsy ho voasakan'ny fefy nentim-paharazana, manatsara ny volovola fotovoltaika amin'ny maraina sy ny hariva, ary maharitra ny fotoana fiasan'ny mpanonja.
3) azo voahosihosy, tsy ilaina ny manamboatra ny fantsona. Ny fametrahana rafi-jiro nentin-drazana nentin-drazana dia mila mitahiry ny fizahana sy ny fikojakojana ny fantsona. Ny fitaovana vita amin'ny famoronana goavam-be U-forme dia azo averina mivantana amin'ny fametrahana sy ny fikojakojana, izay mampitombo ny habetsahan'ny napetraka isaky ny faritra unit amin'ny 50% raha ampitahaina amin'ny fandaharana nentim-paharazana mahazatra.
4) Ny rafitry ny rano tsy manjary. Ny fanalefahana ny rafitry ny rano tany am-boalohany dia mampihena ny vidin'ny fikojakojana ary tsy mitaky ny famongorana sy fikojakojana lehibe. Taorian'ny famarotana varotra dia tsotra sy haingana.
5) Miaraka amin'ny firafitry ny taolana fanamafisana azy dia tsy mila bracket ny firafitry ny vy, ny famonjena sy ny fitaovana. Ny vidin'ny ankapobeny dia ampitahaina amin'ny rindrina mitifitra fitaratra mahazatra.
6) Ny fiverenan'ny fampiasam-bola dia avo ary lehibe ny efitrano famoronana. Ny fitaovam-panamboarana vera miforimora U dia afaka ampiasaina mivantana ho toy ny trano fiarovana ivelany, toy ny tafo, ny fiskoson-tsindrimandry ary ny rindrina ivelany. Fampiasam-bola indroa, fidiram-bola avy amin'ny famokarana herinaratra mihoatra ny 30 taona.
7) fanadiovana samirery. Miaraka amin'ny teknolojia fanadiovan-tena mandroso, afaka manaisotra vovoka manomboka ny folo taona izy io, ahena ny vidin'ny fikolokoloana isan'andro.
8) Ny kalitao sy ny valin'ny fiainana maharitra. Ny rafi-pananana misy 5 taona, ary ny tarika dia manana garantiana 10 taona. Ny antoka dia 90% no nomena fahefana tao anatin'ny 10 taona ary 80% no nahazo isa fahefana tao anatin'ny 25 taona.
9) Fanaraha-maso lavitra. Mampianara ny toe-draharaha miasa eo amin'ny rafitra herinaratra amin'ny herin'ny masoandro.
10) Famolavolana lamination ho an'ny tenany manokana, fahombiazana famokarana ambony.
Previous: Taratasy vita pirinty & seram-peo & Frosted-ambany-U U Pejy / U Channel fitaratra
Manaraka: Rafitra fitotoana vita amin'ny vera ambony / U Channel Glass
U Mamoaka antsipirihany
Famolavolana vera ambony sary U / Fantsom-pifandraisana ...